Taratasy ohatra hangataka fandoavam-bola amin'ny ora fanampiny
Posted by Tranquillus | Nov 19, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Tsy maintsy aloa ianao amin'ny ora fanampiny niasanao. Ny slip-nao dia tsy maintsy manondro ny ora maro niasanao sy ny sanda nomena anao. Na izany aza, indraindray ny mpampiasa anao dia manadino ny mandoa azy ireo. Azonao atao ny mangataka azy ireo avy eo. Ho an'izany dia tsara ny mandefa taratasy any amin'ny departemanta voakasik'izany mba hangataka famerana. Ireto misy santionany taratasy mangataka fandoavam-bola.
Misy antsipiriany momba ny ora fanampiny
Ny ora rehetra ampiasain'ny mpiasa amin'ny fandraisana andraikitry ny mpampiasa dia raisina ho toy ny ora fanampiny. Eny tokoa, araky ny fehezan-dalàna momba ny asa, ny mpiasa dia tsy maintsy miasa 35 ora isan-kerinandro. Ankoatra izany, fampitomboana no apetraka amin'ny mpampiasa.
Na izany aza, tsy tokony afangaro ny olona iray mihoatra ny ora sy ny ora fanampiny. Izahay dia mandinika ny ora na mpiasa miasa tapa-potoana. Ary iza no takiana miasa ora mihoatra ny faharetan'ny fotoana voalaza ao amin'ny fifanarahana nataony. Toy ny ora fanampiny.
Amin'ny tranga iza avy no tsy jerena ny ora fanampiny?
Misy ny toe-javatra izay tsy jerena ny ora fanampiny. Amin'ity karazana toe-javatra ity, ny mpiasa dia tsy afaka mangataka ny fandoavam-bola na inona na inona fiakarany. Anisan'izany ireo ora nanapahanao hevitra fa hataonao irery. Tsy misy fangatahana ataon'ny mpampiasa anao. Tsy afaka mamela tara ny adiresinao roa ora isan'andro ianao. Avy eo mangataha mba homena anao amin'ny faran'ny volana.
Avy eo, ny fotoana iasanao angamba dia faritana amin'ny fifanarahana vidin-javatra raikitra, aorian'ny fifanarahana nifampiraharahana tao anatin'ny orinasanao. Andao alao sary an-tsaina fa ny ora fanatrehana isan-kerinandro omen'ity fonosana ity dia 36 ora. Amin'ity tranga ity, ny overruns dia tsy raisina, satria tafiditra ao anaty fonosana izy ireo.
HAMAKY Modely taratasy kaontim-pitahirizana fotoana alaina alaina
Ary farany, misy ihany koa ny tranga izay soloina ny ora fanampiny amin'ny fotoana onitra, ka raha zonao izany. Tsy afaka manantena zavatra hafa intsony ianao.
Ahoana ny fomba hanaporofoana fa misy ny ora tsy voaloa?
Ilay mpiasa maniry ny hiroso amin'ny fitarainana momba ny ora tsy voaloa dia afaka manangona ireo antontan-taratasy rehetra mamela azy hanohana ny fangatahany. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mamaritra mazava tsara ny ora fiasany izy ary manombana ny isan'ireo ora mihoatra ny ora mifandraika amin'izany.
Vantany vao voamarina ny zava-drehetra. Malalaka ianao hanolotra ho porofon'ireo fijoroana ho vavolombeloon'ireo mpiara-miasa aminao, ilay fanaraha-maso an-tsary. Ireo fandaharam-potoana mampiseho ny ora fiasanao ora, ny sombin'ny hafatra elektronika na SMS mampiseho ny fifandraisanao amin'ny mpanjifa. Kopian'ny diary elektronika, firaketana ny famantaranandro. Mazava ho azy fa miaraka amin'ny kaonty mifandraika amin'ny ora fanampiny izany rehetra izany.
Raha ny momba ny mpampiasa anao, dia tsy maintsy feheziny ny toe-javatra raha ara-dalàna ny fangatahanao. Amin'ny fiarahamonina sasany dia mila miady isam-bolana ianao. Raha tsy misy ny fidiranao an-tsehatra dia ho hadino ara-dalàna ny fandoavana ny ora fanampiny.
Ahoana ny fomba hirosoana amin'ny fitarainana noho ny tsy fandoavana ny ora fanampiny?
Ny fotoana iasan'ny mpiasa matetika dia atao amin'ny filàna sy ny tombontsoan'ny orinasa. Noho izany, ny mpiasa izay mihevi-tena ho tratry ny tsy fandoavana ny ora ampaham-potoana vitany dia afaka mangataka fanamarinana miaraka amin'ny mpampiasa azy.
Dingana maromaro azo arahana mba hahazoana valiny tsara. Voalohany, mety ho fanaraha-maso ataon'ny mpampiasa izany. Noho izany ny olana dia afaka mivaha haingana amin'ny fanoratana taratasy manoritra ny olanao. Etsy ankilany, raha sanatria mandà tsy handoa ny trosany aminao ny mpampiasa. Ity fangatahana ity dia tokony hatao amin'ny alàlan'ny taratasy voasoratra anarana miaraka amin'ny fanekena ny fahazoana azy.
HAMAKY Ny tatitra momba ny hetsika, fitaovana ilaina hanambarana ny asanao.
Raha mbola tsy te hamaha ny toe-javatra ny mpampiasa, rehefa avy nahazo ny mailakao. Mifandraisa amin'ny solontenan'ny mpiasa hilaza aminy ny momba anao ary mitady torohevitra. Miankina amin'ny habetsaky ny fahasimbanao sy ny antony manosika anao. Anjaranao ny mijery raha mankany amin'ny tribonaly indostrialy ianao. Na raha ajanonao fotsiny ny asa fanampiny. Miasa bebe kokoa hahazoana izany, tsy dia mahaliana.
Taratasy santionany amin'ny fangatahana fandoavam-potoana
Ireto misy maodely roa azonao ampiasaina.
Tompoko / tompoko,
Ao [City], amin'ny [daty]
Taratasy voasoratra anarana izay ekena ny fandraisana
Lohahevitra: Fangatahana fandoavana ora fanampiny
Mpikambana hatramin'ny [daty nanakarama] tamin'ny [toerany], niasa [isan'ny ora fiasana mihoatra ny ora niasa] nanomboka tamin'ny [daty] ka hatramin'ny [daty]. Izany rehetra izany dia mba handraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny orinasa sy hahatratrarana ny tanjona isam-bolana. Nihoatra ny ora 35 aho, ny ora fiasana ara-dalàna isan-kerinandro.
Eny tokoa, rehefa voaraiko ny taratasy fandoavam-bolako ho an'ny volana [volana nitrangan'ny fahadisoako] ary rehefa namaky azy aho, dia hitako fa tsy isaina ireo ora fanampiny ireo.
Izany no antony avelako handefa anao ny antsipiriany mamintina ny ora ampiakarako mandritra io fe-potoana io [apetaho ireo antontan-taratasy rehetra manamarina ny ora fiasanao sy manaporofo fa niasa ora ianao]
Tiako ny mampahatsiahy anao fa amin'ny fampiharana ny fepetra voalaza ao amin'ny andininy L3121-22 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa, dia tokony hampitomboina ny ora rehetra. Mampalahelo fa tsy izany ny karamako.
Koa mangataka anao aho mba hiditra an-tsehatra mba hahitsy haingana araka izay haingana ny toe-javatra misy ahy.
Miandry ny valiny avy aminao, raiso azafady, Ramatoa, ny arahaba indrindra.
Taratasy voasoratra miaraka amin'ny fanekena ny fahazoana azy
Ampahany amin'ny mpiasa ao amin'ny orinasa hatramin'ny [daty fandraisana] eo amin'ny toeran'ny [paositra], manana fifanarahana asa iray aho izay manonona ora fiasana isan-kerinandro izay tsy mihoatra ny 35 ora. Na izany aza, vao nahazo ilay taratasy fandoavam-bola aho ary gaga fa tsy nisaina ny ora niasako.
Raha ny tena izy, nandritra ny volana [volana] dia niasa [isan'ny ora] mihoatra ny fangatahan'ny Ramatoa [anaran'ny mpanara-maso] aho mba hahatratrarako ny tanjon'ny volana.
Tiako ny mampatsiahy anao fa raha ny fehezan-dalàna mifehy ny asa dia tokony hahazo fisondrotana 25% aho mandritra ny adiny valo voalohany ary 50% ho an'ny hafa.
Noho izany dia mangataka aminao aho mba hamindranao fo amiko amin'ny fandoavana ny trosako.
Mandritra ny fisaorana anao mialoha noho ny fidiranao amin'ny serivisy fitantanana kaonty, azafady, Tompoko, ny fanehoana ny fandinihako fatratra.
Sintomy ny “Premier-modele.docx”	Premier-modele.docx - Nalaina in-7808 - 20 Kb
HAMAKY Modely taratasy hangataka mialoha na hametraka
Sintomy ny “Deuxieme-modele.docx”	Deuxieme-modele.docx - Nalaina indroa - 7295 Kb
Taratasy ohatra hangataka fandoavam-bola amin'ny ora fanampiny January 8th, 2022Tranquillus
Teo alohaCovid-19: esorina ny fe-potoana fiandrasana noho ny fijanonan'ny asa sasany
manarakaFrance Relaunch | Fandefasana ny sehatra "Tanora 1, vahaolana 1"
Ny fehezanteny mahazatra mahazatra dia misy singa 4
Mifidiana fomba amam-panao manambatra ny fanoloran-tena sy ny matihanina
Toro-kazo taratasy hanaiky na handà ny fifandanjana amin'ny kaonty rehetra
Inona no fehezan-teny manara-penitra tokony hanaraka ny rafitra “Mihantona…”?